WESLI (معهد اللغة الإنجليزية اللغة الثانية ولاية ويسكونسن) ကို Wisconsin ပြည်နယ်၏ မြို့တော် Madison တွင် ၁၉၈၁ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် တက္ကသိုလ်တက်လိုသော ကျောင်းသားများ၊ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်လိုသူများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူများအတွက် WESLI တွင် Level ၈ခုခွဲကာ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
WESLI တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ခန့်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည်။ WESLI တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မှ တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အ သင်း0င်ြ ဖစ် သ ည့်THE မှ တရား0င်အသိအ မှတ်ြ ပု ထား သော ကျောင်း တစ် ကျောင်းြ ဖစ် ကာြ ပည် နယ် ဥပေ ဒနှင့်အ ညီ အေ မ ရိ ကန် တွင် ကျောင်း တက် လိုေ သာ ကျောင်း သား များကို သာ0င်ခွ င့်ြ ပုေ သာ ကျောင်းြ ဖစ် သည်. အေ သး စိတ် သိ ရှိ လိုပါက WESLI ၏0က်ဘ်ဆိုက် လိပ် စာ www.wesli.com0يمكن الوصول إليها.
وجود آمن، مرغوب فيه جميلة وممتعة
CLASSES & SCHEDULE: والقوائم الطبقة
WESLI المستوى الأساسي للغة الإنجليزية في المدارس المهنية0يمكن أن مستوى 8 التدريس على مستوى الانقسام. (WESLI ၏ သင်ရိုးနမူနာကို စာမျက်နှာ ၆တွင်လည်းကောင်း၊ ၀က်ဆိုက်ပေါ်ရှိ “ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်စာသင်နှစ်စာရင်း(current session course list)"يمكنك عرض إما.) အတန်းတစ်တန်းလျှင် ပျှမ်းမျှ ကျောင်းသား၉ဦးသာ လက်ခံလေ့ရှိပြီး WESLI တွင်တက်ရောက်ရန် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။တက်ရမည့် စာသင်ကာလ တစ်ခုလျှင် နှစ်လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်းတက်ချိန် တစ်ပတ်လျှင် ၁၈နာရီမှ ၂၂နာရီ၊ အိမ်စာအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၁၀နာရီမှ ၁၅နာရီခန့် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကာလတစ်ခုပြီးလျှင် ဆက်လက်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသည် မိမိ တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းကာလ အတွက် ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားရမည့်အချိန်နှင့် ပညာသင်စားရိတ်ကို ကျောင်းလျှောက်လွှာ (သို့)0ويمكن الاطلاع على الموقع.
المعلمين & الموظفين: المعلمون / المعلمين والموظفين 0
OVERSEAS CONDITIONAL ADMISSION (OCA): ပြည်ပကျောင်းသား ခြွင်းချက်ဝင်ခွင့် (အိုစီအေ)
OCA လျှောက်ထားရန် အချက်အလက်ပြည့်စုံသော(ပညာရေး ၊ ငွေကြေး စသည်) ကျောင်း သား များ အ တွက် WELSI မှ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များမှထံမှ အကူအညီ ရ ယူနိုင် မည်ြ ဖစ် သည်.
المهجع: အေ ဆာင်
HOMESTAY مع عائلة أمريكية: အမေရိကန်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း